Rwendo urwu rwuri kuuya apo nyika yatarisana nematambudziko makukutu anosanganisa kuramwa mabasa kwavanachiremba, kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu.
VaMnangagwa vakadimurira zororo ravo panzira vachiti vainge vachida kugadzirisa dambudziko ravanachiremba avo vakatanga kuramwa mabasa musi wa 1 Zvita gore rapera vachiti muzvipatara hamuna mushonga uye mari dzavari kutambiriswa dzishoma.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro soro paUniversity of Johannesburg Doctor Pedzisayi Ruhanya vanoti VaMnangagwa vaenda nguva isiyo. Vatiwo nzendo idzi hadzina chadzinobatsira nyika.
Asi mutauriri waVaMnangawa VaGeorge Charamba vaudza bepanhau reHerald kuti nzendo idzo dzakakosha sezvo VaMnangagwa vari kuyedza kuumba hukama nedzimwe nyika.
Panyaya yavanachiremba munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana vati vakawanda vatanga kudzoka kumabasa.
Vatiwo hurumende yatenga mishonga yakawanda yekuendesa kuzvipatara sezviri kudiwa navabachiremba. Asi vanachiremba vanoti zvimwe zvipatara hazvisati zvave nemushonga.
Bazi rezvehutano raumba matare ari kutonga vanachiremba vari kuda kudzoka kumabasa sezvo richiti kuramwa mabasa uku kwaisava pamutemo. Izvi zvaunza kunetsana kwakanyanya pakati pehurumende navanachiremba uye vanachiremba pachavo.
Asi munyori mukuru mubazi rezvehutano Dr Gerald Gwinji vati vanachiremba vanofanira kuenda kudare votongwa. Vati dare iri richatonga risina divi rarinorerekera. Vamwe vanachiremba vanonzi vari kuenda kunotongwa vamwe vachiramba.
Studio 7 ine humbowo hwekuti vanachiremba vakawanda vanogona kudzoka kubasa nemusi weChina asi vari kuda kuti kana vadzoka vangoshande mazuva maviri chete kusvika hurumende yazadzisa zvichemo zvavo.